China Soft PVC Key Covers fekitari uye vagadziri | SJJ
Yakapfava PVC kiyi yekuvhara zvakare inodoma sekiyi kiyi, chinhu chakashambadza chakakwana kwete chete chinogona kushongedza kiyi yako, asiwo kusimudzira bhizinesi rako kana sangano.
Nyoro PVC Kiyi Kavhazvinhu zvakanaka kuchengetedza makiyi ako uye kuratidza ako mabhenji uye hunyanzvi. Yakapfava PVC kiyi makavha anogadzirwa neakapfava PVC zvinhu, ine die yakarova kuumbwa kuti uwane akasiyana maumbirwo uye marogo. Makiyi ako emikova, mota, makesi uye nezvimwe zvinoitwa nesimbi zvinhu zvinogona kuve nyore kugadzirwa, kuisa ChinyoroPVC Kiyi KavhaInogona kuchengetedza uye kudzivirira makiyi ekuti iiswe oxidized, izvi zvinoita kuti makiyi ave matsva uye akajeka. Kuisa zvimwe zvakabatanidzwa semarambi ane bhatiri mukati meiyo yakapfava PVC chikamu inogona kushandiswa setochi. Mhando dzakasiyana dzemakiyi akafukidzwa dzinogona kuratidza hunhu hwako hukuru, kuratidza ako mabhureki nehunyanzvi. Iyo diki saizi yeSoft PVC Key makavha ari nyore kuchengeta kana kuunza chero kupi. Izvo zvinhu zvine hushamwari uye zvisina chepfu kune zvakatipoteredza, zvinogona kupfuura United States kana eEuropean ekuyedza zviyero. Ese mavara ePMS aripo, akawanda mavara anogona kuwanikwa pane chinhu chimwe chete. Iwo madhaidhi anogona kuratidzwa zvinoenderana neyako dhizaini.
Motifs: Kufa Yakarohwa 2D kana 3D pane imwechete kana maviri mativi
Colors: Yese PMS Mavara anowanikwa, Akawanda mavara
Zvakajairika Zvakabatanidzwa Sarudzo: Jump mhete, Kiyi mhete, Matare link, Tambo, Bhora ngetani, mwenje, bhatiri uye nezvimwe.
MOQ: 100 bv pane dhizaini
Pashure: Yakapfava PVC Keychains
Zvadaro: Yakapfava PVC Bhodhoro Inovhura
kiyi yekuvhara kesi
makiyi anovhara ekutengesa
PVC Kiyi Kavha
rabha kiyi inovhara
nyoro PVC Kiyi Covers
Bhodhoro Kuvhura Keychains